(Redirected from Rudziyakamwe)
Nguva yemangwanani ndiyo nguva yokutanga kwezuva kubva pakuyedza kwezuva vanhu vachimuka. Nguva iyi inotaurwawo nenzira dzimwe dzakasiyana. Kubata jongwe muromo kunotaura kuti munhu amuka rungwanani machongwe asati akukuridza. Mashambanzou inguva yerungwanani zvakare apo panoonekwa nzou dzichienda kudziva kunonwa mvura nokugeza miviri yadzo.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguva_dzezuva&oldid=82135"
This page was last edited on 7 Zvita 2020, at 00:51.